MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Axad ah u ambabaxay dalka Switzerland, isagoo hogaaminaya wafdi Wasiirro iyo mas'uuliyiin kale isagu jira.
Khayre ayaa lagu casuumey Shir looga hadlayo arrimaha Xuquuqul Insaanka iyo shaqa la'aanta dhalinyarada oo lagu qabanayo magaaladda Geneva, ee caasimadda wadanka Switzerland.
"Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maanta u ambabaxay Geneva. Waxuu ka qeyb gali doonaa kulamo looga hadlayo arrinmaha shaqo la'aanta dhallinyarada iyo haweenka, sidoo kale waxa uu hadal ka jeedin doonaa kulanka Golaha xuquuqul insaanka," ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha.
Safarka Khayre ayaa kusoo beegmaya xilli labo maalmood kahor Muqdisho ay gilgileen saddex qarax oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo shacab ah, sidoo kalena amniga caasimadda uu faraha kasii baxayo.
Madaxda sare ee dowladda ayaa kordhiyay safaradda dibadda, waxaa hadda ka maqan dalka Gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Mursal oo ku sugan Jordon iyadoo Farmaajo uu labo maalmood kahor kasoo laabtey safarkiisii 5aad mudo bil gudaheeda kaasi oo uu ku tagey Qatar.
Socdaalka badan ee dibadda ayaa ku baxa lacago badan, iyadoo dowladda ku tiirsan yahay dhaqaalaheeda deeqaha caalamka uu siiyo, waxaana dalka gudihiisa ka jira amni xumo, xaalado bini'aadanimo iyo biyo la'aan gobollada qaar ee dalka.
Mursal oo la kulmay Guddiga Maaliyadda BF, dibna ugu laabtey Villa Somalia
Soomaliya 23.12.2018. 22:50